OTU ESI EMEPUTA OTU NA FACEBOOK - FACEBOOK - 2019
Mepụta otu na Facebook
Netwọk mmekọrịta netwọk Facebook nwere ụdị njirimara dịka obodo. Ha na-anakọta ọtụtụ ndị ọrụ maka ọdịmma ha. A na-etinyekarị akwụkwọ ndị dị otú ahụ n'otu isiokwu nke ndị na-eso ụzọ na-atụle. Ihe dị mma bụ na onye ọ bụla onye ọrụ nwere ike ịmepụta otu nke ha na otu isiokwu iji chọta ndị enyi ọhụrụ ma ọ bụ ndị mmekọ. Isiokwu a ga-eche banyere otu esi eme ka obodo gị.
Isi nzọụkwụ ịmepụta otu
Na nhazi mbụ, ị ga-ekpebi ụdị nke ibe a, isiokwu na aha. Usoro okike di otua:
Na ibe gị na ngalaba "Mmasị" pịa na "Otu dị iche iche".
Na windo nke meghere, ị ghaghị ịpị "Mepụta ìgwè".
Ugbu a ịkwesịrị inye aha ka ndị ọrụ ndị ọzọ wee jiri ọchụchọ ahụ chọta obodo gị. Ọtụtụ mgbe, aha ahụ gosipụtara isiokwu dum.
Ugbu a ị nwere ike ịkpọbata ọtụtụ ndị ozugbo. Iji mee nke a, tinye aha ha ma ọ bụ adreesị email n'ọhịa pụrụ iche.
Ọzọ, ị ga-ekpebi na ntọala nzuzo. Ị nwere ike ime ka ọha mmadụ mara, ebe ikpe ndị ọrụ niile ga-enwe ike ile posts na ndị òtù, na-enweghị mkpa maka ntinye ntinye. Emechibidoro pụtara na ọ bụ nanị ndị òtù nwere ike ile akwụkwọ, ndị òtù na nkata. Nzuzo - ị ga-akpọ ndị mmadụ ka ha bịa na otu gị, ebe ọ bụ na ọ gaghị ahụ ya na ọchụchọ ahụ.
Ugbu a, ị nwere ike ịdepụta akara ngosi obere maka ìgwè gị.
Nke a bụ isi nke ihe okike. Ugbu a ịkwesịrị ịhazigharị nkọwa nke ìgwè ahụ ma malite mmepe ya.
Iji hụ na ọrụ zuru oke na mmepe nke ibe e kere, ịkwesịrị ịhazi ya.
Tinye nkọwa. Mee nke a ka ndị ọrụ ghọta ihe nke a bụ maka. Nakwa ebe a ị nwere ike ịkọwa ozi banyere ihe ọ bụla na-abịanụ ma ọ bụ ndị ọzọ.
Tags Ịnwere ike ịgbakwunye ọtụtụ isiokwu iji mee ka ọ dịkwuo mfe maka obodo gị iji chọọ site na ọchụchọ.
Geodata. N'akụkụ a ị nwere ike ịkọwa ozi gbasara ọnọdụ nke obodo a.
Gaa na ngalaba "Njikwa Otu"ime nlekọta.
N'akụkụ a, ị nwere ike soro arịrịọ maka ntinye, tinye foto bụ isi, nke ga-emesi isiokwu nke ibe a ike.
Mgbe ị kwadoro, i nwere ike ịmalite ịzụlite obodo iji mee ka ọtụtụ ndị ọzọ nabata ya, mgbe ị na-ekepụta ikuku magburu onwe ya maka ịlụ nwoke na nwoke na nwanyị.
Ịkwesịrị ịdị na-arụsi ọrụ ike ka ndị ọrụ wee banye na mpaghara gị. Iji mee nke a, ị nwere ike na-ebipụta ihe ndekọ dịgasị iche iche, akụkọ banyere isiokwu ahụ, na-ede akwụkwọ maka ndị enyi, na-akpọ ha òkù isonyere. Ịnwere ike ịgbakwunye foto dị iche iche na vidiyo. Ọ dịghị onye na-egbochi gị ịmepụta njikọ na ihe ndị ọzọ. Duru nhoputa ndi mmadu di iche iche ka ndi oru jiri aka ha kwue echiche ha.
Nke a bụ ebe okike nke Facebook zuru ezu. Mee ka ndị mmadụ sonyere, bipụ akụkọ ma kwurịta okwu iji mee ka ikuku dị mma. N'ihi nnukwu ohere nke netwọk mmekọrịta ị nwere ike ịchọta ndị enyi ọhụrụ ma gbasaa mmekọrịta gị.
https://termotools.com ig.termotools.com © Facebook 2019